Teregiramu yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kugadzirisa mameseji akatotumirwa kare | IPhone nhau
Teregiramu yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kugadzirisa mameseji akatotumirwa
Teregiramu yave kwechinguva ikozvino imwe yeanonyanya kushandiswa mameseji kunyorera nevashandisi, kunyangwe ichiri nzira refu kubva kuWhatsApp, vamwe vashandisi mazana mapfumbamwe emamiriyoni ... Teregiramu yave imwe yemapuratifomu ekutumira mameseji inoita kunge iri kuisa toni kutevera maererano nesarudzo idzo idzi mhando dzekushandisa dzinogona kutipa.
Kubatsira kukuru kweTeregiramu ndiko kuwiriranisa pakati pemidziyo yese painoiswa, kunyangwe ari mafoni, makomputa kana mapiritsi, kubva patinogona kugovana mafoto, mameseji, mavhidhiyo, mafaera erudzi chero rupi zvaro ... Izvo zvinotibvumidzawo isu kugadzira mapoka enhengo dzinosvika zviuru zvishanu uye kugadzira nzira dzekuzivisa vateveri vedu sekunge pasocial network vangaedza.
Mune Actualidad iPhone isu tine chiteshi paTeregiramu yevashandisi vese vanoda kuteedzera dzese nhau dzatinoparidza kuburikidza nechishandiso ichi. Panguva ino uye pasina imwe kambani inoitenga, Teregiramu yakasununguka uye haina chero kushambadzira, kunyangwe paine runyerekupe rwevhiki rapfuura umo yakazivisa kuti Google inogona kufarira kutenga Teregiramu kuti iwedzere kune yayo Google + social network.
Pazasi isu tinokuratidza iwe dzese nhau dzeTeregiramu yekushandisa pakati payo inosimbisa mukana wekugona kugadzirisa mameseji atotumirwa anosvika mazuva maviri atumirwa.
Rongedza mameseji ako, kwese kwese, kusvika pamazuva maviri mushure mekutumira.
Taura vanhu vari mumapoka nekutaipa @ uye uvasarudze kubva pane zvinyorwa, kunyangwe kana vasina ma alias.
Svitsa shamwari dzako nekukurumidza nerunyorwa nyowani rwevanhu vari mukutsvaga.
Tsvaga akavakirwa-mukati mabhoti mapfupi mune zvekubatanidza menyu.
Wakawedzera mabhatani ekugovana mumameseji anotumirwa kubva kuruzhinji nzira uye mapoka
Iyo Anwendung ikozvino inorangarira yapfuura scroll nzvimbo kana iwe ukachinjira kune imwe chat ndokudzoka.
Wakawedzera bhatani re 'scroll down', riine 'risingaverengeki' meseji kodhi, kana iwe uchipururudza kumusoro mukutaura.
Meseji ziviso ine zvitambi ikozvino inoratidza inoenderana emoji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Teregiramu yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kugadzirisa mameseji akatotumirwa
Octopocket (@octopocket) akadaro
Chinyorwa chikuru! Teregiramu iri nani kwazvo kupfuura mamwe makwikwi uye nekuvandudza uku yakamisikidzwa sechiyero mumusika.
Uyezve wedzera Bhoti, seni, neni unogona kutora mari yako zvakachengeteka nefoni yako kugamuchira, kutumira uye kufambisa mari yako pakati pemari dzakasiyana.
Nditsvage pa # teregiramu
Pindura kuna Octopocket (@octopocket)
Apple Inosimbisa Yakakanganisika Rwiyo Kubviswa kubva kuApple Music; kururamisa munzira